फ्रान्सबाट अनुराधा भन्छिन्–‘तपाई पनि राजिनामा दिनुहोस् नर्स म्याम’
१५ असोज, फ्रान्स । फ्रान्समा रहेकी पत्रकार अनुराधा पौडेलले नर्स रोशनी शाहीलाई पनि राजिनामा दिन आग्रह गरेकी छन् ।
उनले नर्स मेमले आफैलाई मारेर जागिर नखान सुझाव दिँदै भोली नै राजिनामा ठोक्दा खानै नपाएर मर्नुहोला र भन्ने प्रश्न उठाउँदै भनेकी छन् ‘कसका लागि जिउँदो लास बन्ने ?’
उनले भनेकी छन्, ‘डिप्रेशनमा परेको मानिस बहुत सेन्सेटिभ हुन्छ । सानो कुराले पनि छुन्छ । नर्श मेम माथि अनुसासन गुमाएकी भन्ने भार छ ! यो सहन मेमलाई निकै गाह्रो हुनेछ ।’
यस्तो लेखेकी छन् सामाजिक संजालमा पौडेलले
महरा कान्ड : मिलीभगत र फासफुस ! हामी सुन्नेलाई सिरिग भो अबिस्वसनिय भो । रक्सी पिएर कोठामा पहिलोपटक छिरिस्या त होईन रहेछ महरा सर । मन नपरेको भए एक दनक दिन जतिपनि सकिसिन्थ्यो नर्श मेमले पनि । मन परेरै त होला एउटै गीलासमा चिया पिए झैँ सुरुप्प पारिसेको दुबैले ।
मन मिल्दा सर्प झैँ बटारियो अनि मन नमिल्दा यि चश्मा छाड्यो, लुगा फुकाल्न खोज्यो भन्न भएन । गैह्रकानूनी काम हो तर विश्वासमा कुठाराघात भएको देखिन्छ सतहमा हेर्दा । तर अझै पनि के हो भने महराको नियत ठीक थिएन भने नर्श मेम बोल्नु पर्छ । यसो उसो फास्स फुस्स कुरै छैन । बोल्नु पर्छ ।
बरु यो कान्डको अर्को पाटो के छ भने मेमका श्रीमानले मेमलाई किन डिप्रेशन भएको आरोप लगाएका छन् ? डिप्रेशनमा परेकी श्रीमतीलाई किन एक्लै घर छोड्छन् र महराकै डिउटीमा खटाउँछन् अनि वीर अस्पताल पठाउन्नन् ?
श्रीमान जीको सरुवा या प्रमोशनका लागि उनी प्रयोग भैरहेकी हुन् भने लोग्ने जिउ मास्ने र बेच्न लगाउने अपराधि हुन् र यो बढो दुर्भाग्य हो । मर्ने बेला सम्म पनि साथ र सहयोग दिन्छु भनेर बिहे गर्नेले डिप्रेशनमा परेकी श्रीमतीको सही उपचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उनलाई सँरक्षण दिनु पर्छ कि पर्दैन ?
सरलाई केहि हुन्न भनम् भने त्यत्रो सम्माननिय पद खुस्क्यो नर्श मेमकै कारण । तर पनि यति कान्डले सर सडकमा पुग्नु हुन्न । उता श्रीमान जी लाई भोली देखि महराकी भित्रिया हावा खुस्केकी भनेर झन टर्चर दिने बाटो खुल्यो र यहि निउमा मेमलाई घरबाट खेद्न सक्ने छुद्र मिल्यो । मेमलाई परिवारको सहयोग र सँरक्षण मिलेन भने सडकमा पुर्याउने बाटो खुल्यो ।
डिप्रेशनमा परेको मानिस बहुत सेन्सेटिभ हुन्छ । सानो कुराले पनि छुन्छ । नर्श मेम माथि अनुसासन गुमाएकी भन्ने भार छ ! यो सहन मेमलाई निकै गाह्रो हुनेछ ।
नर्श मिस्को जय होस् । अबका केहि महिना आफैले निकालेका लफडा र आरोप प्रत्यारोप सहन तयार रहनुहोस् र पुन ः गल्ती नदोहराउनुहोस् । बुद्दी अलि पुगेन तपाई पिडीत हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तपाईले आँफैलाई ढाटेको हो भने त्यो सहन झन् गाह्रो हुन्छ ।
यो आपतमै हो माईती काम लाग्ने । माईतका सदस्यहरुले उनका लागि उचित सँरक्षण प्रदान गरुन् ।
नर्श मेम आफुलाई मारेर किन जागीर खाने ? भोली नै राजीनामा ठोक्नु भयो भने खानै नपाएर मर्नुहोला त ? कसका लागि जिउंदो लाश बन्ने ?’